Andian’Olona Tezitra ao Pakistan Mandoro ny Tanàna Kristiana Manodidina Azy Ireo Ao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2013 2:57 GMT
Nivezivezy tao amin'ny tambajotra sosialy tamin'ny alalan'ny pejy Facebook Express Tribune ny sarin'ny hain-tranon'ny Joseph Colony. Ao anatin'ireo sary ireo no ahitana andian'olona mifalihavanja eo am-pandoroana fandriana, milina fanasan-damba ary fitaovana fikarakarana tokantrano.
Lohahevitra mora mahatafintohina ny lalànan'ny fitenenan-dratsy ara-pivavahana ao Pakistan; Maty novonoina noho ny fanoherany io lalàna io ny Governoran'i Punjab Salman Taseer sy ny Minisitra Federaly Misahana ny vondron'olona vitsy an'isa, Shahbaz Bhatti.
Reza Habib Raja manoratra ao amin'ny Pak Tea House:
Nentina hamelezana ny fivavahan'ireo olona vitsy an'isa ao amin'ny firenena matetika ny lalànan'ny fitenenan-dratsy ara-pivavahana. Manavakavaka ireo antokom-pivavahan'ny vitsy an'isa ihany koa ny Lalampanorenana ao amin'ny firenena. Voasakana tsy mahazo ho filoham-panjakana na filohan'andrim-panjakana ny tsy-Miozolomana araka ny Lalàmpanorenan'ny 1973.
BoloBhi, fikambanana iray mifototra amin'ny fanajana zo no nisioka lahatsary nataon'i Saad Sarfaraz Shiekh momba ilay zava-nitranga tao Badami Bagh.
Bilaogera sady mpanoratra an-gazety Sonya Rehman nitafatafa tamin'iray amin'ireo mponin'i Joseph Colony:
Mpanao gazety Pakistaney iray monina any Etazonia, Beena Sarwar, no manoratra ao amin'ny bilaoginy, ‘Fanafihana iray efa voarindra hamelezana ny fananan'ny Kristiana ao Lahore; fihetsiketseham-panoherana ny Alahady':
Mamehy ny toe-draharaha any Pakistan ny bilaogy Pak Tea House: